Ve ianao, na ara-barotra ny orinasa orinasa?
Izahay dia orinasa.
Misy sambo vidin'ny mora vidy ny manafatra ny firenentsika?
Fa mba kely, maneho dia ho tsara indrindra. Ary ny ampahany filaminana, lalana sambo ranomasina no tsara indrindra, fa maka fotoana be. Fa maika baiko, dia manoro hevitra amin'ny alalan'ny fandefasana rivotra.
Afaka mpanamboatra ny vokatra voatondro ho antsika?
Afaka mpanamboatra ny fananana voatondro raha hitondra ny santionany ho antsika, na milaza amintsika ny tsipiriany.
Ahoana ny momba ny fanaterana ny vokatra?
A: santionany: 7 andro;
Filaharana ara-: Matetika 25 andro aorian'ny fandraisana ho mpikambana.
Maika Filaharana: Mba mampahafantatra antsika tany am-boalohany araka izay azo atao eo anoloan'ny vokatra vonona.
A: Ny vidiny dia miankina amin'ny zavatra ny fangatahana (endriny, ny habeny, habetsahany)
Beat teny nindramina rehefa nahazo feno famaritana ilay zavatra tianao.
Inona no karazana fandoavam-bola no manaiky?
Manaiky T / T, L / C, DA, DP, Long Term Sary nahazoan-.
Ary izaho, raha tsy afa-po amin'ny fananana izay efa noraisinareo, inona no hataoko?
Raha toa ianao ka mahita zavatra tsy mety amin 'ny vokatra, masìna ianao, alao sary azy ireo amin'ny voalohany, ary handefa ny sary ho anay mba afaka manamarina izay ny raharaha izany. Raha eo amin'ny andraikiny, dia hiala ny vokatra sy maniraka anareo ho famindran-toerana vaovao. Ny fandaniana mifandraika no ho aminay.